musha / Interior design / Maitiro Ekugadzira Iyo Yakaremerwa Patio Iyo Iri zana Nguva Yakawedzera Kupfuura Iyo Yetsika Patio?
2021 / 06 / 20 kupatsanuraInterior design 6398 0
Kune mhando yechivanze, inoshandisa zvine hungwaru musiyano wepakati kupatsanura nzvimbo, kupfuura runako rwechivanze runako zvakanyanya "zvirimo asi zvisina kufumurwa". Uye inodhura-inoshanda, iyi patio yakanyura. Iri kuramba ichitsvagwa zvakanyanya nevechidiki.
Nekudaro, kune shamwari dzakawanda dzinonetseka kuti ruvanze rwanyura pakutanga ivhu repasi. Kana paine dambudziko nehurongwa hwekudzivirira mvura nekuda kwekunaya kukuru, mhedzisiro yacho haifungidzike. Kana mamiriro acho asiri akakomba, pachave nekucheka kwemvura, chiitiko chekudzokera shure, zvichikonzera kukuvara kwepfuma. Kana mamiriro acho akakomba, zvinogona kukonzera tsaona dzemagetsi.
Nhasi tichataura nezve "mambo wemitengo yekuita" yakanyura patio, pakupedzisira, haina kukodzera kutenga. Uye mhinduro kumatambudziko anonetsa ekudzivirira mvura, kudzivirira kubuda, kudzivirira umhutu, nezvimwe.
Chii chinonzi patio yanyura
Iyo inonzi "chivanze chakanyura" inodanwawo “Chikamu cheBindu” (Chikamu cheBindu). Icho chinoreva kushandiswa kwenzvimbo kumberi nekumashure kwemusiyano wehurefu, kuburikidza nenzira yekunyepedzera yekugadzirisa nhanho yepamusoro nenzvimbo, iyo yepakutanga rima, uye hunyoro nzvimbo yepasi pevhu muchivanze chakanaka chinogona kukumbira zuva nemhepo nyowani. . Iyi dhizaini yave kufarirwa munharaunda zhinji dzevagadziri.
Misiyano kubva kumawadhi akajairwa.
a. Kudhura-kudhura kuita
Iyo ine mashandiro uye mamiriro eruvanze. Inodhura zvakanyanya kupfuura imba yemunda. Uye inodziya munguva yechando, inotonhorera muzhizha uye inoumbika. Inogona kushandurwa kuita gadheni tii mukamuri, sunroom, dziva, nezvimwe.
b) Zvimwe zvakavanzika
Nekuti pane musiyano wehurefu nemugwagwa, inowanzo gadzira nzvimbo yakavanda iyo asi isingadonhe, kudzivirira kuve mukutarisa kwakazara kwevanofamba netsoka, uye iko kurira kwekusimbisa kuri nani zvakare.
c.Rich nzvimbo nhanho
Masitepisi epamusoro uye epasi, madziro, fenzi uye greenery zvinoputsa monotony yenzvimbo yakati sandara uye inoita kuti ive yakajeka kupfuma.
Maitiro ekudzivirira mvura uye kudzivirira backflow
Kunyangwe ruvanze rwanyura rwakanaka, kune zvakare musoro wemusoro wedambudziko rekudzivirira mvura nekuda kwemusiyano wehurefu nepasi. Kunyangwe mugadziri wacho aita basa rakanaka mukugadzirwa kweiyo yekudzivirira mvura, asi isati yagadziriswa inofanira kuita yakanaka yekudzivirira mvura dhizaini kudzikisa njodzi yakavanzika yemvura yemvura inodzoka kumashure.
Kuti isapinda mvura, kutanga kubuda kwemvura
Drainage inonyanyo kuve yakakamurwa muvhu repasirose uye padenga drainage.
- Kuti utarise mamiriro emamiriro ekunze emamiriro ekunze, kunaya kwemvura uye nepamusoro data.
- Chinhu chikuru chekutarisa kuburitsa mvura yemvura kana kwanaya, kana paine zvimwe zvekumira mvura yakamira inofanirwawo kutariswa.
- Iyo saizi yemapaipi saizi, inobata bheseni saizi uye inonyudza pombi simba zvinotariswa nekuyerera kwehuwandu hwemvura inonaya.
Kazhinji, mvura inobva muchivanze inonyanyo dururwa kuburikidza nemigero yekudonha uye mapaipi ekubata (akatenderedza fenzi zvakanyanya sezvinobvira) muzvivakwa zvine nzvimbo dzakakwirira kana zvivanze zvakakomberedzwa nehova nenzizi dzine nzvimbo yepasi. Makomba ekudzivirira anofanirwa zvakare kugadzirwa akatenderedza makona kudzivirira mashizha uye madhaka kubva pakuvhara pombi. Mapaipi aya anofanira kuiswa neakarereka mutserendende kuti aone kuti mvura yemvura inoyerera nekukurumidza ichienda mumatsime emvura inonaya.
Nekudaro, kana iyo nzvimbo yechivanze chakanyura iri yakaderera pane iyo mamaspala pombi network, gomba rekuunganidza mvura rinofanira kumisikidzwa muchivanze. Kutanga, rega mvura iyerere ichipinda mugomba rinochengeterwa mvura, uye wozobuda nepombi iri pasi pekumanikidza. Iyo dhiraini mhedzisiro yerudzi urwu rwechivanze haina hushoma kana ichienzaniswa neyekare.
Ehezve, kukonzeresa kwemvura inodzorwa kunogona zvakare kugadziriswa nekuwedzera matsime emvura, mapaipi emvura, mvura inonaya inodzora madziva, kuvhara matangi (imwe kana kupfuura), kuisa jecha nematombo (kudzikamisa mamiriro epasi uye kushandisa mvura yepakati), kana kunyatsogadzira mvura maficha.
Kumusoro kwepamusoro pemvura: Nzira iri nyore ndeyekugadzira imba yezuva. Shandisa isina girazi uye isina kupisa-inodzivirira girazi kuita semi-kuvhara kana kutovhara zvizere chivanze chakanyura. Zvakanakisa kumisikidza matanho emvura kubvumidza mvura yemvura kubuda panze uye kudzikisa kumanikidza kwemvura pamusoro.
Matanho ekudzivirira mvura.
a. Kuvhara mvura kwepasi
Penda pasi nekudzivirira mvura kana kugadzira mwando-chiratidzo cheyadhi, senge hunyoro-chiratidzo membrane, hunyoro-humbowo hwepasi uye pamusoro pevhu. Mushure meizvozvo, gadzira dura rekuputira. Sarudza chinzvimbo che 20Kg B1 giredhi benzene bhodhi kana extruded epurasitiki bhodhi unama kunze kwekudzivirira kwemvura, ichiteverwa nemasonry yekudzivirira, ivhu rekuzadza.
b) Kuvhara mvura
Chidhinha kana chakakandirwa-munzvimbo-chinochengeta madziro chinofanirwa kuvakwa chakakomberedza ruvanze kuti chivharise ivhu rakatenderedza pasi. Rutivi rwekuchengetedza madziro padyo nepasi rinofanirwa kuve rakadzivirirwa zvakakwana. Imwe nhamba yemakomba ekudhirowa inofanira kusiiwa pamadziro, uye mukati merusvingo kunofanira kupendwa nedhaka risingapindiki kuwedzera inshuwarisi yakapetwa kaviri. Izvi zvino chengetedza kugadzikana uye kudzivirira mvura kwemadziro, nepo kuchidzivirira kupinda kwemvura inonaya kupinda mubindu kubva pamadziro emadziro.
c. Kuiswa kwemafashama sensors
Kana mafashama aitika, ruzivo rwemaaramu rwuchasundidzirwa kufoni yakamisikidzwa munguva kuti igadzirise panguva yakakodzera kudzikisa kurasikirwa.
d. Sarudza musuwo nezvakakodzera zvinhu
Iyo yepasi yepasi yakabatana negadheni rakanyura rinofanira kusarudza simbi isina tsvina kana yakadzikama magirazi mikova asina moto, asina mvura uye akasimbiswa zvakanaka.
Nzira yekudzivirira humhutu
Pamusoro pechinetso chekudzivirira mvura, vanhu vazhinji vari kunetsekanawo nedambudziko rehutachiona. Mushure mezvose, inzvimbo yekunze, kunyanya muzhizha. Kana ikasarapwa zvakanaka, kapu yetii muyadhi inogona kubhowa pese pese.
rambi. Mosquito rambi
Otomatiki kuchaja, otomatiki umhutu kudzora, kuuraya umhutu mune zvisingaonekwe.
b) Anoshanda emvura maficha
Teerera kuhuwandu hwenzvimbo dzemvura, nzvimbo yedziva ichawedzera hunyoro hwakawanda humhutu. Asi "mvura mhenyu haimutse umhutu", unogona kuita nzvimbo mhenyu yemvura, kusimudza hove uye zvichingodaro kuwedzera hupenyu hwechivanze, asi zvakare kunogona kudzinga zvipembenene.
c. Zvirimwa zvinodzinga umhutu
Mint, lemongrass, lavender, rosemary, geranium, patchouli, rusenzi husiku uye zvimwe zvirimwa zvakasvibirira zvine zvimwe zvinodzinga zvipembenene.
d. Kuchekerera nekuchenesa nenguva
Kuchekerera maruva uye zvirimwa panguva yakakodzera, kuchenesa mvura yepasi, kuona kufefetedza, kuderedza nzvimbo inovanda umhutu.
e. Greenery pamberi pesuo nemahwindo inofanira kunge iri shoma
Umhutu huchahwanda mumuti, tora mukana weyakavhurika musuwo uye hwindo kuti uboore mukati, kuitira kudzora huwandu hwegirini pamberi pesuwo nepahwindo.
Unoda chivanze, chakasiyiwa kwehupenyu hwako hwese, hupenyu hwehope dzevanhu vazhinji. Ita zviri pamusoro, iwe unogona kuve wakanaka-unoshanda uye unoshanda yakanyura patio!
Pakapfuura :: Iyo Yakakwana Fusion Ye Dhizaini Uye Art | Maria Belousova Zvadaro: Kuzvidzora Uye Kushingairira, Kugadzira Iyo Yakapetwa-Yechipiri Yakakura Flat Pasi | Xia Chenglong Dhizaini